Makiinadaha Warshadaha - AOOD Technology Limited
Mashiinnada warshadaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara si loo gaaro wax -soo -saar sare, hufnaan sare iyo kharash yar. Nidaamyadan warshadaha ee adag, goleyaasha giraanta siibidda iyo kala -goysyada Rotary ayaa si ballaaran loo adeegsadaa si ay u fuliyaan hawsha wareejinta awoodda, xogta, signalada ama warbaahineed oo ka socota qayb taagan si ay u noqoto qayb meerto ah. Marka loo eego kakanaanta nidaamka, siddooyinkii siibashada iyo kala -goysyada Rotary waa la isku dari karaa.
AOOD waxay bixisay nidaamyada giraanta silsiladda mashiinnada warshadaha muddo sannado ah. Waxaad ka heli kartaa siddooyinkii silsiladda AOOD oo fulinaya shaqadooda wareejinta korantada iyo elektiroonigga ah ee mashiinnada alxanka, mashiinnada soo -qaadista iyo meelaynta, mashiinnada baakadaha, nidaamyada maareynta walxaha, hubka robotic, semiconductors, dhalooyinka iyo qalabka buuxinta, qalabka wax -ka -beddelka cuntada, qalabka kormeerka dhuumaha, tijaabinta wareegga miisaska, cidhiidhiga culayska, mashiinnada daabacaadda iyo mashiinnada kale ee waaweyn. Aynu si gaar ah uga yeelno robots, robotku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo waaweyn, mid waa gacanta robotic kan kalena waa jir saldhig.
Gacanta roboticku waxay isku beddeli kartaa 360 ° oo bilaash ah laakiin salka salka ayaa go'an oo waxaan u baahanahay gudbinta awoodda iyo calaamadaha laga soo bilaabo jir -dhismeedka ilaa qaybta xakamaynta cududda robotic. Halkan waa inaan isticmaalnaa giraanta siibista si aan u xallino dhibaatadan iyada oo aan lahayn dhibaato kaabil.
AOOD waxay had iyo jeer ilaalinaysaa cilmi -baarista iyo horumarinta xalalka giraanta cusub. AOOD-rogaal-rogaal-ka-soo-xiriirinta iyo guntimaha silbashada ee aan la xiriirin waxay ku gaari karaan gudbinta lagu kalsoonaan karo muddada hawlgalka xawaaraha sare leh, meerkuriga oo la xiriiraya siddooyinkii warqadda ayaa gaari kara wareejinta aadka u sarreysa ee hadda jirta, sida AOOD 3000amp isku xiraha korantada wareegga korantada ee mashiinnada alxanka.
Alaabooyinka la xiriira: Iyada oo loo marayo Sore Slip Sings, Wareegyada Slip -ka canjeelada,Siddo Slip Siso System